ရေလည်အုံနဲ့ coolant တွေအကြောင်း သိထားဖို့ဆို | CarsDB
ရေလည်အုံနဲ့ coolant တွေအကြောင်း သိထားဖို့ဆို
သင့်ကား ရေလည်အုံ ကောင်း/မကောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ရေလည်အုံ မကောင်းရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
ကားဝပ်ရှော့ အခေါ် ရေလည်အုံလို့ခေါ်လိုက်တာပါ။ တကယ်တော့ ရေလည်အုံဆိုတာ အင်ဂျင်ကို အအေးပေးတဲ့ cooling system ထဲမှာ အရေးပါတဲ့ water pump ပါ။ ဟိုတစ်နေ့က ဝပ်ရှော့ကိုကားတစ်စီးရောက်လာတယ်။ အင်ဂျင် heat အရမ်းတက်နေတယ်။ ဘာဖြစ်နေတယ်မသိလို့ဆိုပြီး လာစစ်တာပါ။ စစ်မယ်ဆိုပြီး အင်ဂျင်ဖုံးလှန်လိုက်တော့ အင်ဂျင်ခန်းတစ်ခုလုံး ရေတွေနဲ့ ရွှဲစိုနေတာတွေ့ရပါတယ်။
ကြည့်လိုက်တော့ ရေတိုင်ကီ (radiator) အပေါ်က ရေတွေယိုနေပါတယ်။ သေချာစစ်ကြည့်တော့ ရေတိုင်ကီအဖုံး (radiator cap) မကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ရေတိုင်ကီအဖုံးကို လဲခိုင်း၊ ရေပြန်ထည့်ပြီး စက်နှိးစမ်းတော့ ရေတွေလျော့သွားတာနဲ့ ရေလည်အုံ (water pump) ကိုစစ်လိုက်တော့ ရေလည်အုံပျက်ပြီး ရေတွေယိုနေတာ တစ်ဆက်တည်း ထပ်တွေ့ရပါတယ်။
အင်ဂျင်ရဲ့အအေးပေးတဲ့စနစ်မှာ အဓိကကျတဲ့ရေလည်အုံနဲ့ ရေတိုင်ကီအဖုံး ပျက်နေမှတော့ ဒီအင်ဂျင် heat တက်တယ်ဆိုတာ မထူးဆန်းပါဘူး။
အခုပြောချင်တာက ကားရေလည်အုံပျက်ရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြတတ်သလဲ? ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ? ရေလည်အုံ ဘယ်နားမှာရှိသလဲ? ဆိုတာလေးတွေကို ကားမောင်းသူတွေအနေနဲ့ မိမိကားရောဂါလေးတွေကိုသိပြီး ကြီးကြီးမားမား အပျက်အစီးတွေမဖြစ်ခင် အချိန်မီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် ပြောချင်တာပါ။
ရေလည်အုံ (water pump)
ကားတစ်စီးရဲ့အင်ဂျင်ဟာ အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲတဲ့ (internal combustion engine) ဖြစ်တာကြောင့် အင်ဂျင်ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ သတ်မှတ်အပူချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ ထိန်းထားရပါတယ်။ ပြောချင်တာက မပူလွန်း၊ မအေးလွန်းအောင် ထိန်းထားမှ အင်ဂျင်ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီနေရာမှာ အင်ဂျင်ရဲ့ အပူချိန်မလွန်ကဲအောင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အအေးပေးစနစ် (cooling system) လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။
ရေတိုင်ကီ (radiator)၊ ရေလည်အုံ (water pump)၊ ပန်ကာ (fan)၊ သာမိုစတတ် (thermostat)၊ ရေပြန်ဘူး (coolant reservoir or expansion tank) အစရှိသည်ဖြင့် အဓိကပစ္စည်းတွေနဲ့ အခြားအသေးစိတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီတွေထဲကမှ ရေလည်အုံ (water pump) ကအအေးပေး စနစ်အတွက် အဓိက အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ဒီရေလည်အုံဟာ impeller လို့ခေါ်တဲ့ ဒလက်နဲ့လည်ပတ်တဲ့ ပန့်ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်ရှေ့ခြမ်းလို့ခေါ်တဲ့ နေရာက တိုင်ပင် ဗတ်ကြိုး (timing belt) ကာဗာတွေအောက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ရေလည်အုံခေါ် ပန့်ကိုမောင်းနှင်ပုံက အင်ဂျင်ကို မောင်းနှင်တဲ့ belt ကြိုးနဲ့တွဲဖက်မောင်းနှင်ပါတယ်။ အင်ဂျင် belt ကြိုးလည်ရင် ရေလည်အုံလိုက်လည်တဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒီလိုလည်တော့ ပန့်မှာပါတဲ့ ဒလက်တွေက ရေ ဒါမှမဟုတ် coolant တွေကို အင်ဂျင်ထဲကိုစီးဆင်းစေပြီး အင်ဂျင်အပူချိန်ကိုလျော့ချပေးတာပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် ရေလည်အုံ (water pump) ကို အကြမ်းခံ၊ အသုံးခံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ရေလည်အုံ (water pump) တစ်လုံးဟာ မိုင် ၉၀,၀၀၀ ကနေ မိုင် ၁၂၀,၀၀၀ အထိခံပါတယ်။ တချို့ကားတွေကတော့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် အဲဒီလောက်မိုင်မရောက်ခင်ပဲ ပျက်ဆီးတတ်ပါသေးတယ်။
ရေလည်အုံ (water pump) ပျက်စီးမယ်ဆိုရင် ပြသမယ့် လက္ခဏာရပ်တွေ
ရေ ဒါမှမဟုတ် coolant တွေက timing belt ကြိုးကာဗာအောက်မှာ ယိုကျနေမယ်၊ စိမ့်ကျနေမယ်။ အဖြစ်များတာကတော့ လည်ပတ်နေတဲ့ရေတွေ coolant တွေမယိုအောင်ထိန်းတဲ့ ရေလည်အုံ (water pump) ရဲ့ ပါကင်ပြားလို့ ဝပ်ရှော့ဆရာတွေခေါ်တတ်တဲ့ gasket တွေဟာသက်တမ်းလွန်ပြီး ပျက်စီးတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အပူချိန်ကြောင့် ပျက်စီးပြီး ရေနဲ့ coolant တွေစိမ့်ထွက်လာတာ။ အဲဒီလိုလက္ခဏာစတွေ့ပြီဆို သင့်ကားရဲ့ ရေလည်အုံ (water pump) လဲရတော့မယ့် လက္ခဏာရပ်ပါပဲ။
တချို့ရေလည်အုံတွေကတော့ ရေလည်အုံ နှာပေါက်လို့ခေါ်တဲ့ ရေလည်အုံမှပါတဲ့ အပေါက်ကနေ ရေယိုတာပါ။ အဲဒီလို ရေယိုလာတယ်ဆိုရင် ယိုလာတဲ့အပေါက်ကို အသေပိတ်လိုက်လို့မရဘဲ (တချို့အလွယ်လုပ်ပြီး ပိတ်လိုက်တတ်ကြပါတယ်) ရေလည်အုံ အသစ်လဲပေးရပါမယ်။
ရေလည်အုံ (water pump ) ပူလီ (pulley) ချောင်မယ်၊ အသံထွက်မယ်၊ ရေလည်အုံမှာရှိတဲ့ ပူလီကို ရှေ့နောက်ကစားကြည့်လို့ အဲဒီဟာက လှုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရေလည်အုံ (water pump) ရဲ့ဘယ်ရင် (bearing) တွေပွန်းစားနေပါပြီ။ မကြာခင်ပျက်စီးတော့မှာပါ။ အဲဒီ ဘယ်ရင် ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင် ရေလည်အုံ (water pump) က မလည်ပတ်တော့ဘဲ အင်ဂျင် heat တက်တာတွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။
ကားဆရာတွေသတိထားသင့်တာကတော့ ရေလည်အုံ (water pump) ကနေ ညည်းသံတွေ၊ ကြိတ်သံတွေထွက်နေပြီဆိုတာကို သတိပြုနားစွင့်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စက်လည်နေချိန်မှာ ရေလည်အုံ (water pump) ကို သွားထိစမ်းသပ်တာမျိုးကို ဆင်ခြင်ရမှာပါ။ (အသံထွက်တာကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါသေးတယ်။ AC compressor၊ power steering pump တို့ကလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်)
နောက် ရေလည်အုံက အင်ဂျင်ရဲ့ ကရိုင်းပူလီကနေ belt ကြိုးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လည်ပတ်ရတာမလို့ ရေလည်အုံနဲ့ ဆက်စပ် belt ကြိုးတွေပျက်သွားရင်လည်း ရေလည်အုံမလည်တော့ဘဲ အင်ဂျင် heat တက်နိုင်ပါသေးတယ်။
ရေလည်အုံ ပျက်စီးစေတဲ့ အခြားတစ်ချက်က အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အအေးခံရည် coolant အစားသာမာန် tap water ခေါ်တဲ့ ဘုံဘိုင်ရေတွေကိုအသုံးပြုတာပါ။ သာမာန်ရေနဲ့ coolant တွေရဲ့ အဓိကခြားနားချက်တွေက ရေဆူမှတ်ကွာခြားတာ (ပုံမှန်ရေက 100ံC မှာ ရေဆူပါတယ်) ပါ။ Coolant တွေရဲ့ ရေဆူမှတ်က သာမာန်ရေတွေထက်ပိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သံချေးတက်တာပါ။ ရိုးရိုးရေတွေဟာ သူတို့သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်အင်ဂျင်နဲ့ အခြားသံထည်၊ သတ္ထုထည်ပစ္စည်းတွေကို သံကြေးတွေနဲ့ ဂျိုးတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ Coolant တွေကတော့ ဒီလို သံကြေးတက်မှုတွေ၊ သတ္ထုကြေးတက်မှုတွေကို အကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က coolant တွေကိုလက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်လိုက်ရင် စေးစေးပျစ်ပျစ်နဲ့ lubricant ဆိုတဲ့ ချောဆီဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့သွားရာ၊ လည်ပတ်ရာ လမ်းတစ်လျှောက်ကို ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ လည်ပတ်စေပါတယ်။ ပိုပြီးတော့လည်း seal ဖြစ်ပြီးလုံခြုံစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် coolant သုံးစွဲတာဟာ ရိုးရိုးရေသုံးတာထက် အင်ဂျင်ကြေးတက်မှု၊ ရေလည်အုံ ပျက်စီးမှုတို့ကို အများကြီးသက်သာစေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ coolant သုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီး ရေလည်အုံတွေကို သက်တမ်းမကုန်ခင် ပျက်စီးစေတာ တော်တော်များပါတယ်။ ဝပ်ရှော့ရောက်လာတဲ့ ရိုးရိုးသာမာန်ရေ အသုံးပြုထားတဲ့ ကားတော်တော်များများရဲ့ ရေလည်အုံတွေကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ရင် ရေကြောင့် သံချေးတက်ပျက်စီးဖို့ အလားအလာတွေများနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေလည်အုံ သက်တမ်းကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ရိုးရိုးရေအစား coolant သုံးစွဲပေးဖို့ အကြံပြုတင်ပြချင်တာပါ။
Coolant သုံးတဲ့နေရာမှာလည်း Concentrated နဲ့ PreMixed ဆိုပြီး အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပြီး Concentrated ဆိုတာကတော့ အရပ်ခေါ် အဆီပါ၊ အဲဒီအဆီကို ဒီအတိုင်း အသုံးပြု မရဘဲ ရေနဲ့ရောစပ် အသုံးပြုရပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ 1:1 ရေ ၁ ဆ အဆီ ၁ ဆ ရောစပ်အသုံးပြုရတာများပါတယ်။ ဒီအဆီတွေကိုလည်း ဒီအတိုင်း ရေမရောစပ်ဘဲ အသုံးပြုရင် အင်ဂျင်နဲ့ ရေတိုင်ကီတွေ ရေရှည်မှာ ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Concentrated အမျိုးအစား၊ အဆီအမျိုးအစားဝယ်မယ်ဆို ရေရောအသုံးပြုပေးရပါမယ်။
PreMixed ကတော့ စက်ရုံက တစ်ခါတည်း အချိုးကျရောစပ်ပြီး အသင့်သုံးစွဲနိုင်တဲ့အမျိုးအစားပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ Stallion တို့ Toyota တို့စသည်ဖြင့်အမျိုးအစားမျိုးစုံရှိ ပြီး အသင့်ရောစပ်ပြီးသား coolant တွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ဘာမှ ရောစပ်စရာမလိုဘဲ အသင့်ထည့်ရုံပါပဲ။
အင်ဂျင် အအေးပေးစနစ် အဓိကလည်ပတ်ရတဲ့ water pump နဲ့တွဲဖက်အလုပ်လုပ်တဲ့ coolant မကောင်းရင် water pump အလွယ်တကူပျက်စီးပြီး အင်ဂျင် heat တက်တဲ့ ပြဿနာကြုံတွေ့ရမှာပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ချက် သတိထားပေးရမှာကတော့ temperature gauge က ပုံမှန် အလယ် cold နဲ့ hot ကြားထဲမှာ တည်ငြိမ်မနေဘဲ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် အတက်အကျ မမှန်ဖြစ်လာမယ်။ အဲဒါဆိုရင် သင့်ကား ရဲ့ (cooling system) အအေးပေးစနစ်ထဲက တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် ရေလည်အုံ (water pump) မှာ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲ error တက်နေပါပြီ။
ရေလည်အုံ (water pump) ချို့ယွင်းနေတာတွေကို သတိမပြုမိဘဲ ကားဆက်မောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ အနိမ့်ဆုံး အင်ဂျင်ပူတက်ပြီး ထိုးရပ်သွားတာကနေ အကြီးမားဆုံး အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးပျက်ဆီးသွားနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေ။
စာရေးသူ : Lynn Za Nee ( P.T.U )
သငျ့ကား ရလေညျအုံ ကောငျး/မကောငျးဘယျလိုသိနိုငျမလဲ? ရလေညျအုံ မကောငျးရငျဘာတှဖွေဈမလဲ?
ကားဝပျရှော့ အချေါ ရလေညျအုံလို့ချေါလိုကျတာပါ။ တကယျတော့ ရလေညျအုံဆိုတာ အငျဂငျြကို အအေးပေးတဲ့ cooling system ထဲမှာ အရေးပါတဲ့ water pump ပါ။ ဟိုတဈနကေ့ ဝပျရှော့ကိုကားတဈစီးရောကျလာတယျ။ အငျဂငျြ heat အရမျးတကျနတေယျ။ ဘာဖွဈနတေယျမသိလို့ဆိုပွီး လာစဈတာပါ။ စဈမယျဆိုပွီး အငျဂငျြဖုံးလှနျလိုကျတော့ အငျဂငျြခနျးတဈခုလုံး ရတှေနေဲ့ ရှဲစိုနတောတှရေ့ပါတယျ။
ကွညျ့လိုကျတော့ ရတေိုငျကီ (radiator) အပျေါက ရတှေယေိုနပေါတယျ။ သခြောစဈကွညျ့တော့ ရတေိုငျကီအဖုံး (radiator cap) မကောငျးတာတှရေ့ပါတယျ။ ဒါနဲ့ရတေိုငျကီအဖုံးကို လဲခိုငျး၊ ရပွေနျထညျ့ပွီး စကျနှိးစမျးတော့ ရတှေလြေော့သှားတာနဲ့ ရလေညျအုံ (water pump) ကိုစဈလိုကျတော့ ရလေညျအုံပကျြပွီး ရတှေယေိုနတော တဈဆကျတညျး ထပျတှရေ့ပါတယျ။
အငျဂငျြရဲ့အအေးပေးတဲ့စနဈမှာ အဓိကကတြဲ့ရလေညျအုံနဲ့ ရတေိုငျကီအဖုံး ပကျြနမှေတော့ ဒီအငျဂငျြ heat တကျတယျဆိုတာ မထူးဆနျးပါဘူး။
အခုပွောခငျြတာက ကားရလေညျအုံပကျြရငျ ဘယျလိုလက်ခဏာတှပွေတတျသလဲ? ဘာတှဖွေဈတတျသလဲ? ရလေညျအုံ ဘယျနားမှာရှိသလဲ? ဆိုတာလေးတှကေို ကားမောငျးသူတှအေနနေဲ့ မိမိကားရောဂါလေးတှကေိုသိပွီး ကွီးကွီးမားမား အပကျြအစီးတှမေဖွဈခငျ အခြိနျမီ ပွုပွငျထိနျးသိမျးနိုငျအောငျ ပွောခငျြတာပါ။
ကားတဈစီးရဲ့အငျဂငျြဟာ အတှငျးပိုငျးမီးလောငျပေါကျကှဲတဲ့ (internal combustion engine) ဖွဈတာကွောငျ့ အငျဂငျြပုံမှနျလညျပတျနိုငျဖို့ သတျမှတျအပူခြိနျတဈခုအတှငျးမှာ ထိနျးထားရပါတယျ။ ပွောခငျြတာက မပူလှနျး၊ မအေးလှနျးအောငျ ထိနျးထားမှ အငျဂငျြပုံမှနျလညျပတျနိုငျမယျလို့ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီနရောမှာ အငျဂငျြရဲ့ အပူခြိနျမလှနျကဲအောငျထိနျးသိမျးထားတဲ့ အအေးပေးစနဈ (cooling system) လုပျငနျးမှာ ပါဝငျလုပျဆောငျနတေဲ့ ပစ်စညျးတှရှေိပါတယျ။
ရတေိုငျကီ (radiator)၊ ရလေညျအုံ (water pump)၊ ပနျကာ (fan)၊ သာမိုစတတျ (thermostat)၊ ရပွေနျဘူး (coolant reservoir or expansion tank) အစရှိသညျဖွငျ့ အဓိကပစ်စညျးတှနေဲ့ အခွားအသေးစိတျဆကျစပျပစ်စညျးတှပေါဝငျပါသေးတယျ။
အဲဒီတှထေဲကမှ ရလေညျအုံ (water pump) ကအအေးပေး စနဈအတှကျ အဓိက အလုပျလုပျရတဲ့ ပစ်စညျးတဈခုပါ။ ဒီရလေညျအုံဟာ impeller လို့ချေါတဲ့ ဒလကျနဲ့လညျပတျတဲ့ ပနျ့ဖွဈပွီး အငျဂငျြရှခွေ့မျးလို့ချေါတဲ့ နရောက တိုငျပငျ ဗတျကွိုး (timing belt) ကာဗာတှအေောကျမှာတညျရှိပါတယျ။ အဲဒီ ရလေညျအုံချေါ ပနျ့ကိုမောငျးနှငျပုံက အငျဂငျြကို မောငျးနှငျတဲ့ belt ကွိုးနဲ့တှဲဖကျမောငျးနှငျပါတယျ။ အငျဂငျြ belt ကွိုးလညျရငျ ရလေညျအုံလိုကျလညျတဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒီလိုလညျတော့ ပနျ့မှာပါတဲ့ ဒလကျတှကေ ရေ ဒါမှမဟုတျ coolant တှကေို အငျဂငျြထဲကိုစီးဆငျးစပွေီး အငျဂငျြအပူခြိနျကိုလြော့ခပြေးတာပါ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ ရလေညျအုံ (water pump) ကို အကွမျးခံ၊ အသုံးခံနိုငျအောငျ ပွုလုပျထားပါတယျ။ ရလေညျအုံ (water pump) တဈလုံးဟာ မိုငျ ၉၀,၀၀၀ ကနေ မိုငျ ၁၂၀,၀၀၀ အထိခံပါတယျ။ တခြို့ကားတှကေတော့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးကွောငျ့ အဲဒီလောကျမိုငျမရောကျခငျပဲ ပကျြဆီးတတျပါသေးတယျ။
ရလေညျအုံ (water pump) ပကျြစီးမယျဆိုရငျ ပွသမယျ့ လက်ခဏာရပျတှေ
ရေ ဒါမှမဟုတျ coolant တှကေ timing belt ကွိုးကာဗာအောကျမှာ ယိုကနြမေယျ၊ စိမျ့ကနြမေယျ။ အဖွဈမြားတာကတော့ လညျပတျနတေဲ့ရတှေေ coolant တှမေယိုအောငျထိနျးတဲ့ ရလေညျအုံ (water pump) ရဲ့ ပါကငျပွားလို့ ဝပျရှော့ဆရာတှခေျေါတတျတဲ့ gasket တှဟောသကျတမျးလှနျပွီး ပကျြစီးတာ၊ ဒါမှမဟုတျ အပူခြိနျကွောငျ့ ပကျြစီးပွီး ရနေဲ့ coolant တှစေိမျ့ထှကျလာတာ။ အဲဒီလိုလက်ခဏာစတှပွေီ့ဆို သငျ့ကားရဲ့ ရလေညျအုံ (water pump) လဲရတော့မယျ့ လက်ခဏာရပျပါပဲ။
တခြို့ရလေညျအုံတှကေတော့ ရလေညျအုံ နှာပေါကျလို့ချေါတဲ့ ရလေညျအုံမှပါတဲ့ အပေါကျကနေ ရယေိုတာပါ။ အဲဒီလို ရယေိုလာတယျဆိုရငျ ယိုလာတဲ့အပေါကျကို အသပေိတျလိုကျလို့မရဘဲ (တခြို့အလှယျလုပျပွီး ပိတျလိုကျတတျကွပါတယျ) ရလေညျအုံ အသဈလဲပေးရပါမယျ။
ရလေညျအုံ (water pump ) ပူလီ (pulley) ခြောငျမယျ၊ အသံထှကျမယျ၊ ရလေညျအုံမှာရှိတဲ့ ပူလီကို ရှနေ့ောကျကစားကွညျ့လို့ အဲဒီဟာက လှုပျနမေယျဆိုရငျ ဒါဟာ ရလေညျအုံ (water pump) ရဲ့ဘယျရငျ (bearing) တှပှေနျးစားနပေါပွီ။ မကွာခငျပကျြစီးတော့မှာပါ။ အဲဒီ ဘယျရငျ ပကျြစီးသှားမယျဆိုရငျ ရလေညျအုံ (water pump) က မလညျပတျတော့ဘဲ အငျဂငျြ heat တကျတာတှဖွေဈလာတော့မှာပါ။
ကားဆရာတှသေတိထားသငျ့တာကတော့ ရလေညျအုံ (water pump) ကနေ ညညျးသံတှေ၊ ကွိတျသံတှထှေကျနပွေီဆိုတာကို သတိပွုနားစှငျ့သငျ့ပါတယျခငျဗြာ။ စကျလညျနခြေိနျမှာ ရလေညျအုံ (water pump) ကို သှားထိစမျးသပျတာမြိုးကို ဆငျခွငျရမှာပါ။ (အသံထှကျတာကတော့ အမြိုးမြိုးရှိပါသေးတယျ။ AC compressor၊ power steering pump တို့ကလညျးဖွဈတတျပါတယျ)
နောကျ ရလေညျအုံက အငျဂငျြရဲ့ ကရိုငျးပူလီကနေ belt ကွိုးတှနေဲ့ ခြိတျဆကျလညျပတျရတာမလို့ ရလေညျအုံနဲ့ ဆကျစပျ belt ကွိုးတှပေကျြသှားရငျလညျး ရလေညျအုံမလညျတော့ဘဲ အငျဂငျြ heat တကျနိုငျပါသေးတယျ။
ရလေညျအုံ ပကျြစီးစတေဲ့ အခွားတဈခကျြက အငျဂငျြအအေးပေးစနဈအတှကျလိုအပျတဲ့ အအေးခံရညျ coolant အစားသာမာနျ tap water ချေါတဲ့ ဘုံဘိုငျရတှေကေိုအသုံးပွုတာပါ။ သာမာနျရနေဲ့ coolant တှရေဲ့ အဓိကခွားနားခကျြတှကေ ရဆေူမှတျကှာခွားတာ (ပုံမှနျရကေ 100ံC မှာ ရဆေူပါတယျ) ပါ။ Coolant တှရေဲ့ ရဆေူမှတျက သာမာနျရတှေထေကျပိုပါတယျ။ နောကျတဈခကျြက သံခြေးတကျတာပါ။ ရိုးရိုးရတှေဟော သူတို့သှားရာလမျးတဈလြှောကျအငျဂငျြနဲ့ အခွားသံထညျ၊ သတ်ထုထညျပစ်စညျးတှကေို သံကွေးတှနေဲ့ ဂြိုးတှကေို ဖွဈစပေါတယျ။ Coolant တှကေတော့ ဒီလို သံကွေးတကျမှုတှေ၊ သတ်ထုကွေးတကျမှုတှကေို အကာကှယျပေးပါတယျ။ နောကျတဈခကျြက coolant တှကေိုလကျနဲ့ ကိုငျကွညျ့လိုကျရငျ စေးစေးပဈြပဈြနဲ့ lubricant ဆိုတဲ့ ခြောဆီဓာတျပါဝငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သူတို့သှားရာ၊ လညျပတျရာ လမျးတဈလြှောကျကို ခြောခြောမှမှေ့နေဲ့ လညျပတျစပေါတယျ။ ပိုပွီးတော့လညျး seal ဖွဈပွီးလုံခွုံစပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ coolant သုံးစှဲတာဟာ ရိုးရိုးရသေုံးတာထကျ အငျဂငျြကွေးတကျမှု၊ ရလေညျအုံ ပကျြစီးမှုတို့ကို အမြားကွီးသကျသာစတောပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ coolant သုံးစှဲမှုနညျးပါးပွီး ရလေညျအုံတှကေို သကျတမျးမကုနျခငျ ပကျြစီးစတော တျောတျောမြားပါတယျ။ ဝပျရှော့ရောကျလာတဲ့ ရိုးရိုးသာမာနျရေ အသုံးပွုထားတဲ့ ကားတျောတျောမြားမြားရဲ့ ရလေညျအုံတှကေို စဈဆေးကွညျ့လိုကျရငျ ရကွေောငျ့ သံခြေးတကျပကျြစီးဖို့ အလားအလာတှမြေားနတော တှရေ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရလေညျအုံ သကျတမျးကွာရှညျစှာ အသုံးပွုနိုငျဖို့ ရိုးရိုးရအေစား coolant သုံးစှဲပေးဖို့ အကွံပွုတငျပွခငျြတာပါ။
Coolant သုံးတဲ့နရောမှာလညျး Concentrated နဲ့ PreMixed ဆိုပွီး အမြိုးအစားနှဈမြိုးရှိပွီး Concentrated ဆိုတာကတော့ အရပျချေါ အဆီပါ၊ အဲဒီအဆီကို ဒီအတိုငျး အသုံးပွု မရဘဲ ရနေဲ့ရောစပျ အသုံးပွုရပါတယျ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့ 1:1 ရေ ၁ ဆ အဆီ ၁ ဆ ရောစပျအသုံးပွုရတာမြားပါတယျ။ ဒီအဆီတှကေိုလညျး ဒီအတိုငျး ရမေရောစပျဘဲ အသုံးပွုရငျ အငျဂငျြနဲ့ ရတေိုငျကီတှေ ရရှေညျမှာ ပကျြစီးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Concentrated အမြိုးအစား၊ အဆီအမြိုးအစားဝယျမယျဆို ရရေောအသုံးပွုပေးရပါမယျ။
PreMixed ကတော့ စကျရုံက တဈခါတညျး အခြိုးကရြောစပျပွီး အသငျ့သုံးစှဲနိုငျတဲ့အမြိုးအစားပါ။ ဈေးကှကျထဲမှာတော့ Stallion တို့ Toyota တို့စသညျဖွငျ့အမြိုးအစားမြိုးစုံရှိ ပွီး အသငျ့ရောစပျပွီးသား coolant တှရှေိပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ ဘာမှ ရောစပျစရာမလိုဘဲ အသငျ့ထညျ့ရုံပါပဲ။
အငျဂငျြ အအေးပေးစနဈ အဓိကလညျပတျရတဲ့ water pump နဲ့တှဲဖကျအလုပျလုပျတဲ့ coolant မကောငျးရငျ water pump အလှယျတကူပကျြစီးပွီး အငျဂငျြ heat တကျတဲ့ ပွဿနာကွုံတှရေ့မှာပါ။
နောကျဆုံးတဈခကျြ သတိထားပေးရမှာကတော့ temperature gauge က ပုံမှနျ အလယျ cold နဲ့ hot ကွားထဲမှာ တညျငွိမျမနဘေဲ နိမျ့လိုကျမွငျ့လိုကျ အတကျအကြ မမှနျဖွဈလာမယျ။ အဲဒါဆိုရငျ သငျ့ကား ရဲ့ (cooling system) အအေးပေးစနဈထဲက တဈခုခု ဒါမှမဟုတျ ရလေညျအုံ (water pump) မှာ ပုံမှနျမဟုတျတော့ဘဲ error တကျနပေါပွီ။
ရလေညျအုံ (water pump) ခြို့ယှငျးနတောတှကေို သတိမပွုမိဘဲ ကားဆကျမောငျးနမေယျဆိုရငျတော့ အနိမျ့ဆုံး အငျဂငျြပူတကျပွီး ထိုးရပျသှားတာကနေ အကွီးမားဆုံး အငျဂငျြတဈခုလုံးပကျြဆီးသှားနိုငျကွောငျးပါခငျဗြာ။
စာဖတျသူမိတျဆှညေီကိုမောငျနှမအားလုံး နညျးပညာဗဟုသုတ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျကွပါစေ။
စာရေးသူ : Lynn Za Nee ( P.T.U )
Posted at: 09-05-2019 08:02 AM